thinzar's blog: An exciting activity at ATV Adventure Park, KL
မိုက်တယ်ဗျို့ ဒေါ်ကြီးသဉ္ဇာတော့ ရောက်သွားပြန်ပြီ တနေရာ၊ ဖတ်ရင်းနဲ့ သွားတောင်သွားချင်လာပြီ။ :D
တော်တော်မိုက်မှာပဲ ဘော်ဒါတွေ အများကြီးနဲ့ဆို ပိုပျော်ဖို့ကောင်းမှာ။
မိုကျတယျဗြို့ ဒျေါကွီးသဉ်ဇာတော့ ရောကျသှားပွနျပွီ တနရော၊ ဖတျရငျးနဲ့ သှားတောငျသှားခငျြလာပွီ။ :D
တျောတျောမိုကျမှာပဲ ဘျောဒါတှေ အမြားကွီးနဲ့ဆို ပိုပြျောဖို့ကောငျးမှာ။
(unicode 5.2 :D)
25/7/11 9:13 AM
It seems exiting activity. Next time you should try White Water Rafting @ Kampar. Test out your river skills and go on an adrenaline rush as you ride through about 14 rapids and cool water river inalush rainforest. It is graded from class I - III.. Post it again once you have succeeded :)
25/7/11 1:21 PM
Mr Geek>> yup.. yay lal mite tar.. (burglish bae kg par tal) :D
Ko AATO>> owh.. anything involving "water" isabig NO NO for me :D (တောင်ပေါ်သူဆိုတော့ ရေကြောက်တယ်။) I'm thinking of canopy walk at taman negara for next trip.. :)
It isanice idea too.. Try to do caving at "Ear Cave" there in Taman Negara before to canopy walk. But I am not sure the cave is still ok for caving.
It seems so interesting trip, sis. If I were you, I would be scared too :)))
21/10/11 4:38 PM
သဉ္စာရေ... ရို့စ် မြန်မာယူနီကုဒ်ကို ဖတ်လို့ ရပေမယ့် ရေးလို့ မရလို့ အချိန်လေး ရှိရင် ကူညီပါနော်။ snow.princess.white2@gmail.com
14/11/11 1:24 AM
Ma rose>> email ပို့ထားတယ်နော် :)
14/11/11 3:09 PM